Broccoli kirimu - Thermomix Mapoka | ThermoRecipes
Makirimu39 maminitsi4 vanhu
Broccoli kirimu inotora imwe nzira kudya kunovaka muviri. Muriwo wakakosha mumamenyu akaenzana uye haugone kushayikwa masikati nemanheru.
Hongu, sesu, iwe rudo mafuta Zvichava nyore kwauri kuti uzvitore kana kamwe chete pasvondo. Izvo zvakare zvinonakidza zviri zviviri mukati chando sezvazviri Zuva.
Iyi kirimu zvakare iri chikafu chikafu nekuti ini handiwedzere kirimu pairi. Hongu ini ndinowedzera mukaka wakazara wese, asi iwe unogona kushandisa semi, skimmed mukaka kana chero mimwe miriwo.
1 Kirimu ye broccoli
Sarudzo ine hutano yekudya zvine hutano uye zvine mwero.
Kubika nguva: 39M
Nguva yakazara: 39M
1 k ye broccoli (kana uchibvisa hunde inoramba iri pa650 g zvakanyanya kana zvishoma)
100 g hanyanisi
600 g yemvura
Isu tinosuka broccoli uye tinopatsanura iwo maruva.
Isu tinowedzera mafuta mugirazi uye chirongwa Maminitsi mashanu, tembiricha yevaroma uye kumhanya 5.
Isu tinowedzera hanyanisi uye tinocheka panguva Masekonzi mashanu, nekumhanya 4. Isu tinoisa poach panguva Maminitsi mashanu, pa varoma tembiricha uye nekukurumidza 5.
Wedzera 500 g yemabrocquoli bouquets neimwe trunk inosanganisirwa, mvura nemapini maviri emunyu.
Mamwe marouquets atakasara anoiswa mumudziyo wevaroma ndokuiswa pamusoro pegirazi. Isu tinoronga 20 maminetsi, varoma tembiricha uye kumhanya 1.
Kana nguva ino yakwana, tinobvisa mudziyo wevaroma, toisa beaker nechimwe chirongwa Maminitsi mashanu, tembiricha yevaroma uye kumhanya 5.
Mushure menguva ino, tinogaya Masekondi makumi maviri, kufambira mberi kumhanya 30-5-7.
Isu tinowedzera mukaka uye chirongwa 2 maminetsi, tembiricha 90º uye kumhanya 3.
Isu tinosevenza kirimu ine steamed broccoli florets.
Mamwe mashoko - Mukaka weAlmond / 9 matsutso echando / 9 akakora anotonhora makirimu ezhizha rino
Tsvaga mamwe mabikirwo e: Nguva dzose, Soup uye mafuta, Muriwo
Yakazara nzira kuchinyorwa: thermorecipes » Thermomix mapepa » Soup uye mafuta » Kirimu ye broccoli
Mhoroi vasikana, nezuro ndakagadzira ino kirimu uye kubudirira, zvaive zvakanaka, mhuri yangu haifarire mhando iyi yemiriwo zvachose, uye vanoida. Ndatenda nemareseji ako
Nhasi ndiri kuzozvikurudzira kuti ndizviite, uye ndinovimba ndine rombo rakanaka sewe Teresa, ndinokuudza ...
Ndiri kufara kwazvo uye ndinokutendai nekutishanyira. Shuwiro yakanakisa.
Nezuro husiku takaitora uye ini ndaida iyo, vasikana vakaitora yakakura uye ini ndasiya zvishoma kudzokorora nhasi ...
Kufuma sei !!!!! Ndazviitira ramangwana uye ndinochida, Mazvita
Anna Fruits akadaro
Mmmm mukuru hongu changamire, mwanasikana wangu akatozvida. A gumi Elena.
Pindura Ana Frutos
Pebble Chinokosha akadaro
izvozvi ndiri kuzvikwenya…. kupfuma sei !!!!
uye zvinotora chero chinhu, zvakapusa uye zano rekudya, handiti?
Pindura kuGem Pebble
Ndakaigadzirira rimwe zuva uye takaida. Hatina kumbobvira tagadzira broccoli uye nekirimu iyi yakapfava kwazvo. Ichave imwe yemabikirwo angu ekutanga. Ndatenda
Iyi kirimu yakanyorovera uye inowanzo shamisa munhu wese. Murume wangu haazi yakawanda yemuriwo iyi zvakare uye akagadzirwa seizvi tinoifarira zvakanyanya.
Iniwo ndinayo seimwe yemabikirwo angu ekutanga ekudya kwemanheru.
Manheru akanaka :) kuravira kwekirimu kwakanaka, ini ndaizongoisa hafu yemvura imomo kuti irege kunyorova. Kuzorora kwakakwana.
Yakapfuma sei kirimu yakabuda ... yakapusa, inokurumidza uye yakanaka kwazvo. Ndotenda zvikuru
Ndiri kufara kwazvo Pilar, kwandiri ndeimwe yemafuta akapfuma andinowana, ndinototora murume wangu kuti atore, yaive anti-broccoli ...
Ndakaisa chimwe chinhu chakafanana muresiphi yechingwa cheChishamiso… Kumba hatigone kuita dairi nekuda kwematambudziko ehurwere, zvakakosha here?
Hi Natacha, haugone here kushandisa mukaka usina lactose kana mukaka we soy?
Isu taingova nekirimu iyi yekudya kwemanheru uye mushure mekuwandisa uye nekuremerwa zvakanyanya kupfuura chikafu chakajairwa, yakatigarisa isu zvinoshamisa, kunze kwekuti inonaka chaizvo. Ndiri kuzoitora seimwe yeakakosha makirimu ekudya kwemanheru, akareruka uye anonaka.
Makorokoto egore idzva munhu wese, uye dai 2011 yaunzira isu mapepanhau mazhinji anonaka kuti tinakirwe nevanhu vatinoda kubika zvakanyanya. Kutsvoda kwakasimba
Ndatenda zvikuru, Marién. Ndiri kufara kuti wakazvifarira, tanga tine kirimu yemuriwo yekudya kwemanheru nekuti tadya zvakawandisa mazuva ano. Anofara 2011!
Elena, mubvunzo mumwe chete, broccoli inogona kuomeswa nechando here?
bs kune td @ s uye rinofara gore idzva..thanks
Pindura kuna linda
Mhoro Linda, hongu inogona kuve chando. Mangwana ini ndinotangawo nemakirimu, kuti mazuva iwayo anonyanya kuoneka. Kwaziso uye Kufara 2011!
Mhoroi, ndiri kuzozviita nhasi kuti ndione kuti zvinoshanda sei, asi ndoda kuziva kuti inobuda nevanhu vangani nemari yawakaisa, ndatenda.
Mhoro Araceli, ndeyevanhu vana. Ndinovimba unozvifarira. Shuwiro yakanakisa.
Mumwe munhu akaedza kuzviita neholiflower, ndinoda kuzviita mangwana kuti ndidye
Mhoro María José, ndinoda koliflower uye ndakazviita imwe nguva, inonaka! Edza undiudze. Shuwiro yakanakisa.
Ini ndichangopedza kugadzira kirimu, uye kunyangwe ini ndisingade broccoli zvakanyanya, chokwadi ndechekuti yakanaka.
Ndatenda nemabheka ako uye nepeji rako, iro randakawana munguva pfupi yapfuura, asi rakandibata zvachose.
Makorokoto paresipi uye ndinokutendai zvikuru nekuita kuti kubika kuve nyore kwatiri.
Murume wangu haape zvakawanda zvakanyanya zve broccoli, kunyangwe isu tichida mafuta uye kunyanya miriwo uye takafarira iyi recipe zvakanyanya, kunyanya iye.
Pindura kuna Yesica
Ndatenda Yesica, munguva pfupi iri kutevera ndichaisa recipe yecoliflower cream yakapfuma zvisingaite. Iyo ine yakanakisa kuravira (ini ndakashamisika). Iwe uchazviona munguva pfupi. Kutenda nekutitevera!
Mangwanani mose. Ndakagadzira kirimu iyi kakawanda uye inonaka. Panzvimbo pemukaka ini ndinoisa angangoita magiramu makumi mashanu emafuta akaderera akaparadzira chizi kana maviri madiki machizi, ini ndinowedzerawo chidimbu cheapio pamwe ne broccoli uye inoratidzika kunge yakanaka. Uchandiudza. Kwaziso.
Ndinofanira kuratidza izvozvo! Kungoiverenga ini ndoziva kuti yakanaka. Huya, svondo rinouya ndichaigadzirira zvechokwadi. Ndatenda zvikuru Miriángeles nekutinyorera uye nekutitevera! Kumbundira kukuru, kwakanaka.
Ndiri kuzvigadzirira izvozvi, uye ndine kusahadzika kaviri:
1. Unogona here kutsiva mukaka wechiedza chizi kana kirimu?
2.Ingave chando kana yaitwa?
Ehe, inogona kutsiviwa. Ivo chaizvo vanokupa iwe creamier dhizaini.
Kana zvasvika pakutonhodza mafuta ekuzora, ini pachangu handizvifarire nekuti iko kusanduka kunoshanduka uye hakutarisike senge kwekutanga. Zvakare neThermomix inokurumidza kwazvo kuzviita zvekuti ini ndinosarudza kuzvitora zvichangogadzirwa.
Sausage inotapira uye inovava muto nematezi nembudzi chizi mafufu